TD Ameritrade waxaa kor u qaadida Seeraar Blockchain - Blockchain News
TD Ameritrade waxaa kor u qaadida Seeraar Blockchain
TD Ameritrade beeray calanka ASCII ah – in uu yahay, imprinted xayeesiin – on Seeraar ayaa blockchain horaantii bishan.
Somailand ayaa online ku dhawaaqday in ay soo diray 68 xawaalad Seeraar si ay u abuuraan calanka a digital ay logo on blockchain Seeraar ah.
Sababo la xiriira nooca blockchain ah, calanka this ayaa hadda weligood sii raagayaan on ledgerka cryptocurrency ee.
“Waxaan jecel helo habab cusub si ay u isticmaalaan farsamada ee soo baxaya. Sidaas awgeed, waxaan go'aansaday in ay leeyihiin wax yar xiiso leh iyo beeri calanka. okay – farsamo, waxaan u gundhig,” Somailand ayaa sheegay in.
“Waxaan nahay Kibriyaan qayb ka mid ah noqon. weligeedba,” Somailand qoray.
Produce ee chips ASIC ka Samsung
Samsung bilaabeen hubsaday ...
macdanta Browser-ku-saleysan ayaa noqonaya mid aad caadi ah
Browser ku salaysan m qadaadiic ...
Post Previous:Iran rasmi ah oo mamnuucday isticmaalka cryptocurrencies
Post Next:Arizona Golaha Wakiiladu cod in canshuur la bixin karaa in cryptocurrency
furtdso linopv ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 7, 2018 at 4:13 PM
Tamar Gneiser ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 29, 2018 at 9:14 PM
History of cryptocurrency ugu horeysay